Global Voices teny Malagasy » Paragoay: Ny 100 andro voalohany nitondran’ny filoha Lugos · Global Voices teny Malagasy » Print
Paragoay: Ny 100 andro voalohany nitondran'ny filoha Lugos
Voadika ny 09 Desambra 2008 21:10 GMT 1	 · Mpanoratra Muna Annahas Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Amerika Latina, Paragoay, Politika
sarin'i Fernando Lugo APC  ary ankatoavina noho ny Creative Commons license.
Nandalo ny 100 andro voalohany nitondran'ny filoha Paragoaiana voafidy Fernando Lugo  hatramin'ny nandraisany ny fitondrana tamin'ny volana aogositra lasa teo. Nangetaheta fanovana ny Paragoaiana, fanovana izany nantenaina be avy amin'ny Filoha vaovao, izay mpitondra fivavahana teo aloha, sy avy amin'ny governemantany. Nisy ary ny mpamaham-bolongana vitsivitsy naka fotoana hanoratana ny andro 100 voalohany nitondran'ny Filoha LUgo.
Nataoon'ny bolongana Rescatar [es] fampitahana tamin'ny hazo Pau D’arco  (Tajy) ny ny 100 andro voalohany nitondran'i Lugo tamin'ny filazany fa nanantena hahita voninkazo (izany no tena voninkazo) mamelana eny amin'ny hazo ny olona, saingy mbola mila jereny aloha izany .
Tsy mbola hita ny fiovana, fa efa tsapa. Raha atao eo amin'ny sehatry ny zavamaniry no ilazana izay nitranga nandritra izay telo volana voalohany izay, dia naniry hahita ny tajy hamelana ny olona, saingy ny hita dia namaka lalina tany anaty tany ilay hazo hampatanjaka azy tsara mba tsy ho voazeran'ny rivotra mora foana izy.
Nomen'i Edgar Ruiz Diaz isa 1 ka hatramin'ny 10 tsirairay avy tao amin'ny bolongany Las Preguntas de Venerando [es] Lugo sy ny mpikambana ao amin'ny governemantany tamin'ny zavabitany .
Filoha Fernando Lugo: Ny fivezivezeny etsy sy eroa moa dia lasa midika hoe asan'ny filoha satria hatramin'ny nitondrany dia nampiasa voromby iray na mihoatra izy hivoahany mankany ivelany na manofa ihany koa izy handehandehanany eto amin'ny firenena isan-kerinandroHis travels . Tamin'ny fampanantenany hitondra fiovana eto amin'ny firenena, dia voaovany ny fomba fijery ary izany no nanaovany ny Mburuvicha Roga (ny trano iasan'ny filoha) ho toerana fihaonana iresahany amin'ny tsy manan-kialofana sy ny tsy manan-tany raha jerena ireo olona mameno azy. Amin'izay fihetsiny izay, dia tahaka ny manao izay hampieritreritra lalina izy fa ny filoha lefitra dia mitovy amin'ny vazy eo ambony birao, ka na dia maro aza ny fahadisoana vitany, dia mieritreritra aho fa mbola afaka manao ny tsaratsara kokoa ny Lohan'ny Firenena ary noho izany dia omeklo isa 5 izy.
Lopez Barrios ao amin'ny El blog de Lopez Barrios [es] no niteny fa, niezaka hitondra ny firenena ao anatin'ny filaminana ny filoha Lugo, saingy tsy nizotra araka izay efa nomaniny ny fandehan-javatra .
Fernando Lugo kosa araka ny fomba fijeriko zavatra dia niezaka hitondra ny firenena amina ambaratongam-pilaminana avoavo kokoa, ny marina anefa dia dia efa tsy milamina intsony ny raharaha… manjaka ny baranahiny… koa na dia miezaka mafy ny ho tsara fijery zavatra aza izahay, dia banga ny laharam-pahamehana ilana fanapahan-kevitra maika.
Fohy loatra ireo andro voalohany nitondran'ny governemanta vaovao ireo hananana fehin-kevitra, saingy ampy kosa ijerena ny heriny sy ny kilemany, araka izay efa nasehon'ny maro amin'ny mpamaham-bolongana ao an-toerana. Tsy misy ny fahagagana, tsy afenina izany, ary lalanan-javatra izany. Amin'ny maha-lalanan-javatra azy, dia maka fotoana sy mila paika mahomby, asa mafy ary angamba vintana kely koa, dia antenanina fa handresy ireo fahalemeny ireo ny filoha vaovao ka hahatonga ny firenena ho firenena manankarena indray.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/12/09/1422/
 sarin'i Fernando Lugo APC: http://www.flickr.com/photos/fernandolugoapc/3081375693/
 Pau D’arco: http://en.wikipedia.org/wiki/Pau_d%27_arco
 mamelana eny amin'ny hazo ny olona, saingy mbola mila jereny aloha izany: http://rescatar.blogspot.com/2008/11/los-primeros-100-das-de-lugo-el-tajy-no.html
 Lugo sy ny mpikambana ao amin'ny governemantany tamin'ny zavabitany: http://www.abc.com.py/blogs/post/682/los-99-dias-de-lugo
 niezaka hitondra ny firenena ao anatin'ny filaminana ny filoha Lugo, saingy tsy nizotra araka izay efa nomaniny ny fandehan-javatra: http://lopezbarrios.blogspot.com/2008/11/estado-de-sitio.html